Ukuthandana kwamaholidi. ... Kakhulu kangakanani kuleli gama lihlangene nenhliziyo yentombazane! Yebo, ngubani kithi, madodakazikazi, abathandanga ne-southern macho? O, ihlobo, ilanga, ulwandle, isihlabathi, umsindo we-surf - umkhathi ngokwayo uqale ngothando olungenakulibaleka lokuvakasha. Futhi la madoda aseningizimu! Ethunziwe, enhle futhi ekhangayo kakhulu. Ziyi (yebo, yebo, lawa magama alinganayo) azokwenza iholidi lakho lingalokothi libaleke. Uzokhumbula ukuthi awuphumuli ngamabhishi ase-sandy, kodwa lawo, ashisayo amadoda aseningizimu, futhi-ke, uthando lokuvakasha.
Kodwa! Amantombazane, qaphela kakhulu. Noma kunjalo, wena uyilwane, ikakhulukazi, ulalelayo, uthanda futhi usengozini. Futhi kusukela kulezi zithandani zamaholide, empeleni, umphefumulo uhlabelela futhi ikhanda liyahamba, kodwa noma kunjalo ubuchopho buyinkimbinkimbi. Kalula nje, ungalahlekelwa ikhanda lakho. Kufanele sihlale siqaphile. Nawa amanye amathiphu okusiza ukukhohlwa ukuthandana kwamaholide.
Ngakho ungakhohlwa kanjani uthando lweholide? Futhi nasi iseluleko sakho iseluleko sokuqala:
Phila leveli, hlala kulo mzwelo owedlula isikhathi eside. Kungani? Yebo, ngoba esimweni sothando ukuthi amantombazane ahle kakhulu (kukhona amahomoni amaningi ahlukene emzimbeni wakho, okungenani odokotela bathi kanjalo), kanye nalokhu kuyi-tan futhi ... voila! Ungumuntu omuhle kunazo zonke kule dolobha enkulu! Futhi-ke uhamba ngomgwaqo (ukukhumbula inkundla yendawo yokubhuka, yebo), ngokuhle kakhulu ngemva kokuhamba ukuphumula, futhi abesifazane besondeza ngombono onomhawu, amadoda aphendukela kuwe ... Phakathi naleso sikhathi ukuzethemba kwakho kuya phezulu esibhakabhakeni! Bheka nxazonke! Leli zwe lihle futhi lingenalo uthando lomculo!
Ithiphu ye-Tip 2. Hlola nxazonke okwesibili. Ngicela ukuba uqaphele kakhulu! Indawo yamahhotela ehle kakhulu, kodwa ngisho nasedolobheni lakubo awekho amadoda ambalwa okufanelekile. Mhlawumbe abanalo lelo tanki le-chocolate, insimu eseningizimu, i-charm ekhethekile, kodwa ayitholi nakakhulu! Vumela bakunake, bahlehlele ubuhlobo obusha, bangakhohlwa izifundo zomkhandlu wokuqala (ukuzihlonipha ezingeni eliphakeme).
Enye into, uma ulindele enye ingxenye yendlu. Kanjani, kungani futhi kungani usishintshe, akunandaba, kodwa akudingeki ukwazi lutho ngeveliveli eholidini, ungazami ukuchaza noma yini kuye, ngeke kusize! Akukho ukuvuma kwezinyembezi, akukho sms-ok eningizimu. Wonke umuntu, ukhohliwe. Kodwa angikhumbuli, ngakho kwakungekho. Ezimweni ezimbi kakhulu, sigcina konke ngaphakathi kwethu. Sibamba ulimi lwethu ngokuqinile. Kulesi simo, udinga nje ukulinda - isikhathi sokuphilisa. Ingxenye yesibili (ekhaya) isigamu izokusiza ukhohlwe uthando lokuvakasha. Angazi kanjani, kodwa uzophumelela, uma nje ethanda. Uma uvuma ukuhlubuka, akasoze akuthethelele ngalokhu.
Yebo, uma lokho kungakusizi, ke inombolo ye-tip 3. Gcwalisa impilo yakho ngento ethakazelisayo. Masibe yilokho: ukuthenga, ukubuthana nabangani, amabhayisikobho, ukubopha, ukusika, ukwehla kweqa. Umsebenzi wethu oyinhloko emva kwendabuko ukukhohlwa, ngakho-ke uzicabange ebhizinisini elisha! Uzobona, konke ukuthandana maduze kuzokhohlwa.
Futhi isihloko sokugcina. Ungathathi i-romance yeholide njengomcimbi omkhulu empilweni yakho. Yebo, bahamba ngaphansi kwenyanga, kahle, bawela esihlabathini. Konke lokhu sekuphelile, futhi ukuphila, njengoba kwaziwa, kuyaqhubeka.
PS Ngamehlo ami, ngisanda kuthatha inothi emasontweni athandwayo ngendodakazi eyayithanda kakhulu ukuthola imali ngamaholide. Waqala inkaba, ngaphandle kokusho igama mayelana nokukhokha, futhi kakade ngobusuku bokubili noma wesithathu wayazi konke mayelana nalesi macho: ikheli, ifoni, isimo somshado. Khona-ke, lapho efika ekhaya, wabiza le ndoda futhi wacela imali yokukhipha isisu, ebiza isamba esihle. Ngandlela-thile, lapho ehlala khona, "wakhulelwa" izikhathi eziningana.
Indlela yokuthola amandla ukuze ulahlekelwe isisindo futhi uziqaphele
Indlela yokuphendula ngokuthukwa: sifunda ukumelana
I-Sport & Chic kuHlund Vuitton elisha elingu-50 amahlanu
Amabhisikidi anamanothi namantongomane
Ikhekhe lase-West-Ukrainian ushizi
Izindlela zomphakathi zokwelapha i-arthrosis yamadolo ahlangene
I-white mushroom sauce
Ukuqaphela isimo sezempilo
I-golden rum ikhekhe
UFiliphu Kirkorov uzohola i- "Eurovision-2009"